DHAMMAAN NOOCYADA BASASHA EE BEERTAADA LEH SHARAXAAD IYO SAWIR - BOW
Noocyada basasha ee beeritaanka dalka
Muhiimadda weyn ee karinta, iyo sidoo kale daawada dad, waa caadiga ah iyo maalin kasta for dhammaan natiijooyinka beerista basasha iyo noocyo toon. Taasi waa sababta ninkii beerta ka shaqeeyaa ama dhirta cagaarka ah si tartiib ah ayey ugu koraan si ay u raali geliyaan naftooda iyo kuwa ay jecel yihiin maaha oo kaliya raashinka caafimaadka leh, laakiin sidoo kale qurxinta quruxda badan ee beerta ama xuduudda - waxaa kaloo jira noocyo lagu qurxiyo dhirta la cuni karo. Maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa dhammaan noocyada basasha iyo toonta, iyo sidoo kale sharaxaad faahfaahsan ee faa'iidadooda iyo khasaarooyinkooda.
Waxaa laga yaabaa in basasha yihiin noocyada ugu caansan ee dhammaan dadka kale laakiin inkastoo tani, waxay sidoo kale la yaabay leh kala duwan. Waxay u muuqataa in khudradda isku mid ah isla waqti isku mid ah ay noqon karto stinging, iyo wakiilkiisa, laakiin nooc ka duwan, waxay noqon kartaa casiir leh, si adag ama adag.
Ma taqaanaa? Waxaa soo baxday in basasha waa geedka daacad ah aad u ixtiraam leh, iyo xididdada magaceeda xitaa gaarsiiyo Masar. Halkan waxaa ku yaal dooxada qadiimka ah ee xabaashii (2800 BC) sawirada dhaqankan ayaa la helay.
Ka mid ah qoyska dhan basasha, bannaanka u had iyo jeer door bidaan nooca dabocase. Badanaa waxaa la koray barta baska, taas oo laga heli karo abuurka isaga laftiisa ama laga iibsado dukaanka khaaska ah. Isla markiiba ka dib iibsashada, waa in si taxadar leh loo diiriyaa oo la qalajiyaa, sidaas darteed meel diiran oo qallalan waa in lagu faafaa lakab khafiif ah. Ka dibna walxaha diyaarka ah waxaa lagu daaweeyaa kiciyaha kobcinta iyo jeermi-dilka, ka dibna waxa uu noqdaa mid si buuxda u diyaar ah beeritaanka.
Waa muhiim! Beerka lagu beero ee ciidda aan kululayn ma ahan mid la jecelyahay, sababtoo ah markaas ayuu si fudud ugu tagaa fallaadhaha. Mudo dheer oo la sugo dalabku sidoo kale maaha mid u qalma. Haddii kale, baaluq cagaaran ayaa si dhakhso ah u kobcin doona, iyo guluubka ayaa ka dambeeya horumarka oo waliba sidiisii ​​oo kale ah.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero geedo safafka safafka, halka aan illoobin si ay u fogaato qiyaastii 20 cm inta u dhaxaysa taasina waa lagama maarmaan si markaa beerto ay u fiican yihiin hawo wanaagsan oo ay ku haboon tahay in iyaga lagu maamulo. Iyo jaka waa in ay midba midka kale ka fog yihiin 5 ilaa 10 cm, tirada saxda ah waxay ku xiran tahay waxa uu yahay dhexroorka basasha diyaarsan. Markaas waa in si adag loo cadaadiyo dhulka iyo daboolay mulch (lakabka 3 cm) kor ku xusan.
Caleemaha kowaad, sida caadiga ah, waxay muuqdaan todobaad ka dib markii la beero. Horumarka habboon, waa inay hadda si fiican u xanaaneeyaan, iyo, intaa ka sarreeya, tani waxay khuseysaa cabitaan toddobaadle ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xusuusto bacriminta dareeraha ah, basasha u jecelyahay iyaga oo aan aadi karin cagaarka muddo dheer iyada oo aan dhar xidhin. Loosinta ciidda waxaa la sameeyaa dhowr jeer toddobaadkii, iyo jaridda - sida loo baahan yahay.
Oo ku saabsan bisha September, waxaad ka fekerin kartaa goosashada, waxaad u baahan tahay inaad tan samayso marka nalalka horeba midab qurux badan oo qurux badan, baaluqyada ma aysan muuqan waqti dheer. Marka dhammaan shuruudaha beeraha iyo daryeelka la dhammaystiro, dhammaan noocyada basasha iyo toonta uu uuraysto waxay ka kori doonaan isticmaalayaasha dhaqaalaha ee dhulka.
Shallot waa noocyo kala duwan oo basasha ah. Waxay magaceeda ku heshay Yurub, Ukraine waxaa loo yaqaannaa baadiyaha, iyo Ruushka iyo Moldova - qoyska yar. Hal buul oo ah geedo ayaa ka soo baxa 3 ilaa 20 basal oo culeyskiisu yahay 10 illaa 50 g. Dhaqaatiirtu way ka jilicsan yihiin oo ka khafiifsan yihiin noocyada kale, waxayna leeyihiin waxyaabo aan fiicnayn.
Si habboon u koraan iyo daryeelka qoyska, Waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato qaar ka mid ah sifooyinka hababkaas:
Waxaa lagu beeray karaa ciidda diyaarisay bartamihii April, maadaama ay adag tahay in la toogto iyo gebi ahaanba indho la'aan u dhaxeyso.
Qodobbo qoyan oo qoyan ayaa si sax ah loo tixgeliyaa carrada ugu fiican ee roodhida.
Waxyaabaha loo beerto waxay u baahan tahay in la cusbooneysiiyo marar badan, sidaa darteed nalalka ma laha infekshan lagu magacaabo kalluunka casaan.
Haddii aad ku koraan noocyada this for isticmaalka ee greenery, ka dibna qaabka beerto waa ku dhowaad la mid ah beerto guluubka, masaafada u dhaxaysa saf ah 20 cm, iyo inta u dhexeysa basasha - 10 cm.
Goynta waxay dhacdaa marka "qoyska" uu ka dhigo in ka badan 50% baalasha maalinta qoraxda iyo diiran.
Waxaad u baahan tahay inaad ku keydsato nalalka caafimaadka leh heerkul ah 1-3 darajo, ujeedkani waa sanduuq ama sanduuq ayaa la xushay. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in buunshaha basasha in aan la kala saarin inta lagu jiro kaydinta.
Waxyaabahan aan la qabin iyo waqti isku mid ah aragti aan caadi ahayn ayaa muddo dheer ku dhuftey wadnaha hudheelka aduunka oo dhan, sababtoo ah xididdadu waxay leeyihiin hilib sare, waa sahlan tahay in la diyaariyo, ugu muhiimsani waa maqnaanshaha ur xun oo ka dib markii la cuno.
Leek waxaa loo arkaa in laga yaabo inay tahay warshadda ugu caansan oo ka mid ah la-taliyayaasha, dhammaantoodna waxaa sabab u ah iska caabida qabowga, dhalidda sarreysa iyo walxaha qiimaha biyokanku. Waxaa lagu koray adduunka oo dhan, badiba aagga diirran, maadaama ay si fiican u habboon tahay xaaladaha cimilada oo dhan. Leek wuxuu ku koray by beeridda abuurka dhulka ama iyada oo geedo.
Meeshayada, kaliya habka labaad ayaa loo isticmaalaa, tan ugu horraysa waxay ku jirtaa dhir aad u dheer. Horumarinta caleemaha wanaagsan, ciidda waa inay ahaato dabacsanaan iyo mid bacrin ah, dhumuc dhexdhexaad ah ayaa si fiican u sharaxan. Dhulka loogu talagalay diyaarinta dhulka waxa badanaa lagu qodaa dayrta si qoto dheer ee lakabka la dillaaco. Kuwa ugu horreeya ee ugu muhiimsan ee khudradda cagaaran waxay yihiin digirta, baradhada, qajaarka iyo kaabajka.
Waa muhiim! Waa suurtagal in la beero khudaarta basal dhulka hoostiisa, halkaas oo qaraabadoodu koraan ka hor. Haddii kale, mustaqbalka, waxaa laga yaabaa in lagu dabagalo cudurada iyo kalluunka caadiga ah.
Sida noocyo kale oo dhirta basbaaska, waxaa lagama maarmaan ah in la qoyo leekada waqtigeeda, habka ugu wax ku oolka ah waa in lagu waraabiyo jeexjeexyada. Marka la eego xannaanaynta, ma aha wax xamaasad ah, wax walba waxaa loo sameeyaa sida caadiga ah - dabcinta, jaridda dhirta iyo quudinta. Laakiin, ka sokow tan, fikrad wanaagsan waxay noqon doontaa in la qalajiyo dhirta caleemaha leh caleemaha iyo peat - tani waxay kaa caawin doontaa inaad ilaaliso qoyaanka iyo ka hortagga horumarinta haramaha.
Ma taqaanaa? Leek waa calaamad qaran oo Wales ah, waxaana lagu sawiray lacag dhan 1 rodol.
Basasha waa la goostay markii loo baahdo (sida ay u bislaadaan), shoogeelay wiiqay, ruxin oo ku ridaan sanduuqyada horay loo diyaariyey ee qaab ama dhinac ah. Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro caleemaha wasakhda ah iyo waxyeello ka soo baxa dhirta la uruurshay, iyo sidoo kale in la gooyo xididada iyo caleemaha saddex meelood hal meel Habka ugu fiican ee lagu keydsan karo fitamiinkan xooggani waxay noqon doontaa baakad ku jirta caag iyo caagag. Heerkulka kaydinta heerkulku waa inuu ahaado inta u dhexeysa -2 iyo +2 ° C, waana in lagu hayaa heer isku mid ah mar kasta oo ay macquul tahay.
Kala duwan ee basal-batun ma aha mid si kala duwan u kala duwan muuqaalka laga soo qaaday basasha caan ah, si kastaba ha ahaatee, noocyada noocan ah waa la koray oo keliya cagaarka, maadaama aysan jirin guluubka oo dhan. Batunku wuxuu leeyahay caleemo waaweyn oo kori kara ilaa 40 cm iyo ilaa 2 cm wareegga wareegga.
In kasta oo xaqiiqda ah in basalkan uu awood u leeyahay in uu ku korto meel isku mid ah ilaa 10 sano, haddana wali wuxuu muujinayaa waxqabadka ugu weyn ee 3-4 sano ka dib beeridda.
Farqiga kale ee wanaagsan ee batunka ka yimaada inta kale ee basasha "qoyska" waa heerka ugu sareeya ee caabuqa barafka, waayo waxaad si sahlan u diyaarin kartaa heesaha aqalka dhirta lagu sameeyo oo leh heerkul ah 11-12 digrii. Iyo miraha this warshad aan ciriiri karaa Gorminate horeba laba digrii oo kulaylka ah, laakiin doorashada ugu fiican ee biqilka ugu dhakhsaha badan, dabcan, wuxuu noqon doonaa ilaa 20 digrii.
Ma jiraan wax khilaaf ah ama khilaafyo gaar ah oo lagu beerayo batun, abuur waxaa lagu beerayaa guga horraantii iyo xataa xitaa daaqadaha Febraayo, iyo kiiskan caleemaha dhadhan fiican ayaa laga heli karaa bisha July.
Haddii dhaliddu ay ku dhacdo habka daaqsinka, duurka udubdhiga ah ee noocyadaas waa in loo qaybiyaa qaybo, qiyaastii shan dhirta cawska.
Goosashada hore ee guga, transplanting waa in la sameeyaa by bartamihii August.
Waa muhiim! Wixii beeridda guga hore, miraha waa in loo isticmaalo qalalan iyo qalajin, haddii ay soo noqnoqonayaan, ka dibna miraha waa in la diyaariyaa horay, iyaga oo horay qaniinay.
Marka laga hadlayo qulqulka batun, masaafada loo soo jeediyo inta u dhaxaysa saf waa in ay ahaataa 30-40 cm, iyo qoto dheerta abuurka waa inay ahaataa qiyaastii 2 cm.
Basasha ayaa laga goyn karaa laba siyaabood, iyadoo ku xiran nooca beerashada: haddii dhirta loo qorsheeyay sanadkiiba, miraha waxaa lagu beeray guga kadibna dib u qoday gebi ahaanba, iyo haddii ay tahay daa'in, cagaarka ayaa la jarayaa hal mar ama laba jeer guga kadibna xilliga dayrta.
Iska yaree caleemaha waa inay noqdaan marka ay dhererkoodu ka yaraato 20 ilaa 25 sentimitir. Qaybaha la kaydiyay ee qaboojiyaha, oo hore loo geliyey caag.
Sida kiiska batun, warshadda basasha Schnitt waxay si gaar ah ugu koraan si ay u soo saaraan caleemo dhadhan fiican leh. Siberia, waxaa lagu magacaabaa Rezan ama Rezun, qaybta waqooyi ee Ruushka - shnitt-basasha, iyo koonfurta waxaa loogu yeeraa iskudhaf ama qabiil. Homeland Schnitt waxaa loo tixgeliyaa inay tahay Waqooyiga Shiinaha iyo Mongolia.
Nasiib darro, nasiib daro, qiimo yar ayaa ka jirta aagahayaga, sidaas darteedna waxa lagu koray qadar yar. Hase yeeshee, waa ilo dhab ah oo fiitamiino iyo walxo kala duwan ah, waxaana badanaa lagu daraa cuntooyinka daweynta dadka qaba cudurrada kalyaha iyo nidaamka wadnaha.
Faa'iidada kale ee muhiimka ah waa iska caabinta barafka ee shnitta, caleemaha yar yar ee si fudud u adkeyn kara baraf diiran, warshad qaangaar ah ayaa awood u leh inay u adkeyso heerkulka xitaa -8 digrii.
Daryeelidda alaabkan aan caadi ahayn waa asalka noocyada kale, waa qoyaan-jecel oo jecel bacarinta Bacriminta organic iyo macdanta.
Nalalka ma sameysid shaybaarkan, laakiin waqti isku mid ah ayaa lagu kala saaraa awood wayn oo laanta laanta. Nidaamka asaasiga ahi waa mid aad u fiican, si fiican ayaa loo horumariyaa, badanaaba wuxuu bilaabmaa inuu cusboonaysiiyo bartamaha xagaaga.
Ka hor intaan laga saarin chives, fiiro gaar ah ayaa loo bixiyaa diyaarinta ciidda, sababtoo ah, sababtoo ah miro yar-yar, geedo hore waxay u muuqdaan kuwo aad u tabar daran, sida wareega yar, sidaas darteed waa in si taxadar leh looga ilaaliyo haramaha.
Beeridda waxaa lagu sameeyaa dhererka 2 cm, masaafada u dhaxaysa safafka waa in ay ahaataa ugu badnaan 45 cm, sidoo kale waxa fiican in dalagga dalagga ee xilligaas la socdo humus, peat ama balka, ma iloobin wakhtiga dabacsanaanta, sidaas darteed mishiinka ka dib markii roobab culus aysan ka hortagin soo bixitaanka caleemaha cusub .
Marka heerkulka hawadu uu yahay 18-20 digrii, caleemaha jilicsan ayaa si dhakhso ah u koraan waxayna diyaar u yihiin in la gooyo 12-14 maalmood. Goynta ayaa sida caadiga ah la bilaabaa marka sanduuqyada dillaacsan ay ka muuqdaan dalladaha iyo miraha madow si cad ayaa loo arki karaa. Ka dib markii la isku qalajiyo oo qallajiyo qol hawo leh, caleemo delicious ayaa lagu hayaa qaboojiyaha.
Slyzun qaanso - waa warshad dilka ah oo qashinka ah, taas oo marar dhif ah laga helayo meelaha bannaankeeda. Dabeecadda noocan oo kale ah noocyada noocan oo kale ah maaha mid la caddeeyay, sababtoo ah gardarrada, xaqiiqda, waa tusaale faa'iido leh oo qiimo leh. Intaa waxaa dheer, waxay gebi ahaanba ka duwan tahay dhadhanka noocyada kale, iyada oo la isticmaalo waxaa lagu qori karaa qoraallada toon ah oo la isku halleyn karo.
Dhirta lafteedu waxay leedahay muuqaal qurux badan oo qurux badan, sidaas awgeed si sahlan ayaa loogu beeray beeraha xayawaanka oo kaliya si ay u farxaan isha.
Slizunku waxay leedahay sifo u adkeysi leh oo u adkeysata isla markaana awood u leh inay u adkaysato heerkulka 40-degree heerkulkiisa, sidoo kale gebi ahaanba waa mid aan waxtar lahayn cayayaanka oo keeno goosashada 5 sano.
Ciidda beerashada ayaa ka wanaagsan in la doorto qashinka ama wax yar oo loamy ah, si aysan jirin wax kakooban oo biyo ah, taas oo xannibmi karta helitaanka hawada iyo kicinta dhimashada guluubka. Xilliga dayrta, dhulka waa in laga buuxiyaa digada wasakheysan iyo humus, ma ilaawin ku saabsan bacriminta macdanta caadiga ah.
Slizunka waxaa badanaa la faafiyaa habka daaqsinka, maadaama ay taasi keento dhalid ka dhakhso ah. Waxaad ku fariisan kartaa bisha Agoosto ama Sebtembar, ama horraanta gu'ga. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad qodo saddex sano oo duurka ah oo kala gedisan ee qaybaha, halka aad u baahan tahay inaad hubiso in geed kasta leeyahay qaybtiisa iyo 3-4 nalalka.
Faafinta abuurka sidoo kale waa mid fudud, tan tan dhamaadka Abriil, geedo xilliga qaboobaha waxaa lagu beeray dhul furan oo ku saabsan murugada 1 cm. Ka dibna grooves ayaa si khafiif ah u budada leh lakabka khafiifka ah ee carrada, qoyaan leh dhalada buufin iyo daboolay filim.
Daryeelidda jajab waa wax aan ka duwaneyn daryeellidda noocyada kale ee basasha. Sanadka ugu horeeya, kaliya baal yar oo foomka duurka, ee labaad - waa Blooms, iyo in saddexaad - waxaa mar hore suurtogal ah in la abaabulo gabi ahaanba ka gooyay caleemaha.
Basasha la jarjaray ayaa ah geed gaaban oo aad u wanaagsan, waxaana lagu beeray dalal badan oo adduunka ah. Lama helin qaybinta qaybinta khudaarta cagaaran, inkastoo qayb ka mid ah bayoolajiyada firfircooni ay si weyn u dhaaftay inta ka hartay noocyada basasha.
Caleemaha khudradda waa kuwo banaan, fistu, iyo waqti dheer waxay ku hayaan muuqaal aan cillad lahayn. Nalalka dhulka hoostiisa ah waxay la mid yihiin basasha, laakiin, iyaga oo aan ka duwaneyn, ma haystaan ​​wakhti ay ku hagaagaan si habboon iyo, sida caadiga ah, waa kuwo aad u liita, laakiin waxay leeyihiin tayada dhadhanka sare, iyo joogitaanka miiska waxay farxad gelin doonaan martida iyo martida.
Qeybta kore ee aadka loo yaqaan 'multi-tier' waa mid aad u qabow u adkaysata, waxay ku haysaa roogag yar oo baraf ah oo xitaa heerkulkoodu yahay afartan sarrif-cabbir, iyo caleemaha yaryar waxay u adkeysan karaan heerkulka -5 ° C. Iyadoo aan qabin carrada, laakiin ma aha inay noqoto acidic. Kuwa ka horeeyay waxay noqon karaan dhir ayadoo la isticmaalayo Bacriminta dabiiciga ah.
Caadi ahaan waxaa lagu beeray nalalka faraha badan ee dhamaadka xagaaga ama xilliga dayrta, mar walba sariirta qiyaas ahaan 10-15 cm. Si ka duwan xeerarka inta ka hadhay beerashada basasha, noocyada noocan ah waa in la beero isla markiiba ka dib roobka, ka dibna wuxuu si dhakhso ah u roonaan doonaa oo ka fiican, taas oo macnaheedu yahay Perezimuet sidoo kale xaaladaha dhulka hoostiisa.
Tartanka xayawaanka ee xagaaga faa'iidooyinka xamaamka ee beerta ma aha oo kaliya dareenka culeyska, laakiin sidoo kale wuxuu ka caawiyaa dalagyada beerta kale inay ka cabsiiyaan cayayaanka noocan oo kale ah sida rinjiga iyo slugs.
Laba nooc oo waaweyn ayaa macaamiisha dhexdooda caan ku ah - guga iyo toonta jiilaalka. Tiknoolajiga koraya waa mid fudud, laakiin xeerar xiiso leh ayaa sidoo kale u baahan in la raaco. Tusaale ahaan, waa in la xusuusnaado in dhaqanku uu si aad ah u daboolo ciidda, waxay u baahan tahay in la koro oo kaliya carrada dhexdhexaadka ah ee nooca bacda iyo loamy. Xasuuso sharoobada iftiinka leh, sidoo kale, ha ahaato.
Cagaarshow, cawshin, qajaarka, basasha, yaanyada, gooseberries, raspberries iyo currants madow waa deris fiican oo isaga u ah, iyo dhufanayada, tulipska iyo gladioli ayaa laga sameeyay ubax: wuxuu ka ilaaliyaa meel madow.
Waxaa macquul ah in lagu daro toonta oo kaliya habka daaqsinka ah, maadaama aysan miraha abuurin. Xilliga gu'ga waxa la abuuraa nalalka qoyan, iyo jiilaalka - oo leh nac iyo nalalka hawada. Ka hor intaan la beeri, ilkaha waa la xarriiqay oo la jeermi-tiray, iyo, haddii la doonayo, waxay waxoogaa yaraan kartaa si loo dedejiyo heerka koritaanka.
Toonta xilliga guga waxaa badanaa la beeray April ama May, sida ugu dhakhsaha badan ciidda kulaalaa ilaa ugu yaraan +5 ° C Qodobka qashinka ah wuxuu ku xiran yahay dhererka dhoobada, taas oo lagu kordhiyay 2, inta badanna waxay ku dhajisaa 5-6 cm. Isla markiiba ka dib marka la beertay toonta, sariirta ubaxa waa inay ahaataa mulched, masaafada u dhexeysa beerto waa in la dhigaa ilaa 18-20 cm.
Springs of guga dabiici ah sida caadiga ah waxay u muuqdaan heerkul ah + 3-4 ° S oo ha ka jawaabin dhaxan. Haddii xagaaga ee gobolka uu kulul yahay, carrada waa in lagu daro maaddada iftiinka ah. Waraabintu way ka duwan tahay waxayna kuxirantahay xilliga koritaanka: marxaladda firfircoon waa in ay ahaataa mid aad u saraysa, marxaladda korriinshaha waa inay dhexdhexaad tahay, maaddaama xad-dhaaf ah qoyaanka ay sababi karto qashinka nalalka iyo horumarinta cudurada aan loo baahneyn.
Quudinta waa in la sameeyaa 2 jeer: ee guga - digo lo'da, iyo xagaaga - oo leh xal ash caadi ah. Iyadoo mulching lagama maarmaanka ah ee toonta ciida, loosening iyo jaridda dhirta waa la illoobi karaa, iyo sidoo kale yaraynta joogtada ah ee waraabka at times.
Sida loo beerto toonta jiilaalka, waxaa lagu fuliyaa bartamaha xilliga dayrta, mana aha mid si gaar ah u degdeg ah si aysan ilkuhu u bixin koboc dhaqaale oo ay u adkeeyaan muddada qabow.
Dhulka beeritaanka u baahan yahay in la diyaariyo horay, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyaan oolin, on hoose ee kaas oo ku shub lakabka iftiin ee ciid qalafsan ama ash. Qoto dheer ee lagu beeray toonta jiilaalka waa in la ogaadaa, qiyaastii 15 cm Cirifka sare ee sariiraha waxaa lagama maarmaan ah in lakulo mulch, taas oo ilkaha ka ilaalin doonta barafka, waxaa ku jiri kara peat ama balka. Daryeelka noocan oo kale ah waa isku mid sida guga.
Nasiib darro, inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, toonta ayaa jirran karta cudurada sida caaryada madow, noocyada kala duwan ee kallana, ama xagta oo caarad leh. Isku dayista cayayaanka ayaa sidoo kale faragalin kara barbaarinta nabadgelyo, sida caadiga ah boogaha basasha, dirxiga ama cayayaanka afar-lakabka ah. Главная профилактика против всех этих проблем заключается в правильной подготовке почвы, в выбранном здоровом посадочном материале и избавлении от больных растений. А предотвратить нападение вредителей всегда помогает соседство чеснока с календулой или цикорием.
Hadda, ka faa'iideysiga macluumaadka ee maqaalkani, qof kasta, xitaa bilawga beerta hiwaayadda ah, si fudud u kala soocaan basasha iyo noocyada toonta leh iyagoo sharraxaad faahfaahsan ka bixinaya sawirada iyo magacyada, iyo inay naftooda iyo dadka ay jecel yihiin ku raaxaystaan ​​dalxiis cajiib ah oo wanaagsan.